Ibex MAB: maIndices matsva pamusika weSpanish stock | Ehupfumi Zvemari
Kubva zhizha rapfuura hauchazofaniri kuzvikwanisa kumusika unoramba uchienda invest yako mari. Izvi zvinodaro nekuti indices mbiri nyowani dzakabuda dzinobva Imwe nzira Stock Market (MAB). Aya mairi indices akaita seaya anomiririrwa neIbex MAB All Share uye Ibex MAB 15. Iwo mabhenji chaiwo akasarudzika ane hunhu hwakajairika uye anoasiyanisa kubva kumisika yemari yakajairika yawakashandiswa nayo kusvika zvino.
Mune aya masheya indekisi anoverengerwa akateedzana ehunhu ayo anosiyaniswa neakanyanya kusagadzikana. Nemusiyano wakakodzera pakati pemutengo wayo wepamusoro uye wepasi. Kusvika padanho raanogona kuburitsa kusiyana kusvika ku15% uye mune dzimwe nguva kunyangwe nemakwiriro epamusoro. Ivo vanodiwa zvakanyanya nevashambadzi vane hukasha sezvo vachigona kuita mari yakawanda munzvimbo pfupi kwazvo yenguva. Kunyangwe nekuda kwezvikonzero zvakafanana, njodzi dzakanyanya kwazvo. Nekuti iwe unogona kusiya maeuro mazhinji munzira kana shanduko yayo isiri sezvaidiwa.
Aya mairi indices matsva emusika weSpanish wemusika wemusika unopa kupihwa kwakakura kuitira kuti iwe ugone kuita purofiti inobatsira kubva panguva dzino dzakakosha. Ichi ndicho chimwe chebatsiro rwechitarisiko chayo mumisika yemari. Nekuti pakupera kwezuva iwe ucha dzimwe sarudzo kupi kwekusarudza. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti iwo akanyanya kukosha maitiro. Hazvishamisi kuti aya makambani madiki emari ekushambadzira asina imwe mhinduro yekuwana migero yezvemari pane kunyora pamisika iyi yemamwe maSpanish equities. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve aya maviri masheya indices?
1 Ibex MAB: chii izvo?
2 Ibex MAB 15: anomiririra zvakanyanya
3 Ibex MAB Yese Kugovana
4 Maawa ekutengesa
5 Iwo makambani muchikamu chekuwedzera
6 Iwo haasi makambani anozivikanwa
Ibex MAB: chii izvo?
Iyo Ibex MAB Yese Kugovana uye Ibex MAB 15 indices akafanana chaizvo asi iwo haana kunyatso kufanana chinhu. Vanopa misiyano yakakunakira iwe kana uchizotarisa mashandiro ako kubva zvino zvichienda mberi. Kubatana kwavo ndekwekuti mareferenzi maviri aya anouya kubva kune Imwe Soseti Soko. Ichi chatova chiratidzo chekuti nzvimbo dzekudyara dzinogona kuenda kupi. Kune zvaunogona kuwana kubva kune chero bhangi uye pasina chero ganhuriro. Muchokwadi, nevazhinji vashoma uye vepakati varimari vakasarudza iyi imwe nzira yekudyara.
Kana isu tichitaura nezve Ibex MAB tiri kureva nhevedzano yemaitiro yausingazombowane mumusika unoramba uchienderera mberi. Asi handicho chikonzero nei mashandiro ako achigona kuve asina mari kubva ikozvino. Kusvikira padanho rekuti indices yavo yemasheya yakaratidza mashandiro ari nani kubvira pavakagadzirwa kupfuura indekisi yebenchmark yemusika wemasheya weSpanish, Ibex 35. Kubva pano maonero, zvine chokwadi chekuti hauzove nedzimwe njodzi mune mafambiro aunogadzirisa. Asi zvinopesana, ivo vanochengetedza kumwe kufanana neIbex.
Ibex MAB 15: anomiririra zvakanyanya
Imwe yeaya ma indices kwaunogona kushanda kare iIbex MAB 15. Ndiyo yakanyanya indekisi uko makambani gumi nemashanu anomiririra eAmahofisi eStock Market akarongwa. Iyo poindi yekurehwa kune vese varairidzi vanoshuvira kutora chinzvimbo mune iri rakasarudzika boka reSpanish equities. Chokwadi mamwe ehunhu hwakabatanidzwa muIbex MAB 15 unonzwika kujairika kwauri.Sezvo mune chaiwo mamiriro e Eurona, Carbures kana Catenon. Kusvika padanho rekuti vafara mune kumwe kunoshamisa kwekufamba kwemusika weSpanish wemusika.
Aya makambani akanyorwa anozivikanwa nekuti mitengo yavo inogona kudzikisira ne15% muchikamu chimwe chete chekutengesa. Kune anotevera kurasikirwa neepesenti imwechete kana kutowedzera kurodza. Zvakanyanya zvakaoma kuona maitiro izvo zvinotsanangurwa chaizvo uye nekudaro njodzi ichagara iri huru kupfuura kuburikidza nenhengo dzeIbex 35. Ichi ndicho chinhu chaunofanira kuongorora kubva zvino kana usiri kuda kuva nezvimwe zvinokatyamadza mukushanda kwako pachena mumisika yemari. .
Ibex MAB Yese Kugovana
Ndiyo imwe indekisi yemari dzeSpain dzaunogona kushanda nadzo senge zhizha rapfuura. Mune ino chaiyo kesi, iwe urikutarisa kune ese ekuchengetedzeka akanyorwa mune Imwe Alternative Stock Market chikamu chemakambani. Kwete gumi neshanu sepakutanga, asi nhengo dzayo dzese. Semhedzisiro yechinhu chakakosha ichi, ichokwadi kuti iwe uchave nemikana yakakura kuvhura nzvimbo kubva panguva dzino chaidzo. Asi nemamwe makambani anopa kutaurirana kudiki kwazvo kwemazita avo. Kusvika padanho rekuti iwe uchave nenjodzi dzakakomba dzekupindwa muropa. Ndokureva, nematambudziko mazhinji ekuita kutengesa pamutengo wemusika.
Chero zvazvingaitika, iyo Ibex MAB Yese Kugovana inogona kunakidza kuisa mari pane imwe nguva chaiyo. Nekudaro, mashandiro acho anofanirwa kuitirwa nguva pfupi yekugara. Nekuda kwekusagadzikana kukuru uko mitengo yavo inotaurwa. Iyo ichave iri yakanyanya kunaka nzira yekuzvidzivirira kubva kune zvisingadiwe zviitiko zvinogona kukuvadza zvakanyanya zvaunofarira semudiki nepakati investor iwe zvauri. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi kana kubva pakuona kwekuongorora kwakakosha.
Imwe yeakanyanya kufanira hunhu hwechengetedzo aripo mune aya mairi indices emusika wemasheya ndiyo yavo yekoteti sisitimu. Nekuti zvirizvo, inogona kuita mumusika unoramba uchienderera sevamwe veSpanish equity proposals. Kana pasi pemafomati e kugadzirisandiko kuti nekucheka kaviri pazuva, imwe yemangwanani uye imwe yemasikati. Iyi quote modhi ine kusakosha kukuru kuti kwakanyanya kuomesa kugadzirisa mutengo wekutenga uye kunyanya mutengo wekutengesa weumwe neumwe mabasa anoitwa. Iko kusagadzikana kuti iwe unenge usina sarudzo kunze kwekufungidzira kana iwe uchida kushanda mune imwe yeaya mairi ma indices ayo anoumba iyo Imwe nzira Yemari Yemusika.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti zvakakosha kuti iwe utarise kubva zvino zvichienda mberi kuti zvakajairika mukirasi ino yekuchengetedzeka kuti hapana shanduko mumutengo wavo kwenguva yakareba. Kusvika padanho rekuti rizogadzira rakanyanya dambudziko kwauri gadzirisa mitengo yekubuda uye yekupinda mumisika yemari. Kunyangwe iine njodzi chaiyo yekukochekerwa pazvinzvimbo zvavo. Mhedzisiro yeichi chiito ndechekuti pakupedzisira haugadzirise mashandiro sezvaungave uchida kubva pakutanga.
Iwo makambani muchikamu chekuwedzera
Chimwe chinhu chinosanganisirwa nemakambani mune aya mairi indices matsva eiyo Imwe nzira Soko Rekutengesa nderekuti vanoisa mitengo yavo kwete pazvinhu chaizvo. Asi pane zvinopesana mune zvinotarisirwa zvisina kuzadzikiswa mune zvese zviitiko. Hazvishamisi kuti iwo akateedzana ehunhu ayo ari zvisikwa zvichangobva kuitika uye kuti vanoda mari kuburikidza nemisika yemari. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei vachibatanidzwa muMAB. Kazhinji zvinouya kubva kumatunhu matsva kana zvakabatanidzwa kumatekinoroji matsva. Zvakadai se, semuenzaniso, masocial network, internet, kunyorera kwedhijitari kana kufona.
Ehezve, imwe yemasangano avo akajairika ndeyokuti hapana imwe yemakambani iyi inoparadzira zvakagoverwa pakati pevashandi vayo. Mune imwe yezviitiko iwe yaunowana iyi mhando yekutsiva. Kana izvi zviri izvo zvaunenge uchitevera, zvichave zvirinani kusatora chinzvimbo mune aya mareti indices kubva zvino zvichienda mberi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti iwo makambani asinganyatso kuunza purofiti mumaakaundi ebhizinesi avo. Ivo vanoisa zvese zvavanotarisira pane zvakanakira zvavanogona kugadzira uye kuyedza kuunza iyi pfungwa kune vashoma nepakati varimi. Usakanganwe nekuti chinhu chakakosha kuti unzwisise rudzi urwu rwekudyara.
Iwo haasi makambani anozivikanwa
Kune rimwe divi, iwe uchaonawo kuti huwandu hwakawanda hweaya maitiro haunyatso kuzivikanwa nevashambadzi. Kusvika padanho rekuti unogona kunge usati wambonzwa mazita avo pane imwe nguva. Chokwadi ichi chinoita kuti iwe uwane mukana wekutora zvinzvimbo mumusika wakasarudzika wemari. Zvimwe zvezvirevo izvi zvave zvakare nyaya dzezvikanganiso zvakakura nekuda kwekubiridzirwa kwemaakaundi avo ebhizinesi. Imwe yenyaya dzakanyanya kukosha ndidzo dzakaitika gore rapfuura ne Gowex. Kusiya zviuru nezviuru zvevashambadzi vadiki nepakati mukuparadza.
Iyi ndiyo njodzi huru yaunotarisana nayo kana uchiita zvikamu mumakambani aya. Nekuti ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda mukushanda. Asi zvakare kukusiira maeuro mazhinji munzira uye kunyange kurasikirwa neyese mari, sezvazvakaitika pane imwe nguva. Aya ndiwo mamiriro ezvinhu aunofanirwa kudzivirira zvachose pazvirongwa zvauri kuzokudziridza kubva panguva dzino chaidzo. Chero zvazvingaitika, iwo haasi misika yekuti iwe uise mari hombe yemari. Kana zvisiri izvo zvakatarwa mashandiro uye pamusoro pezvose pane mashoma. Ichave imwe yedzakanakisa nzira iwe yaunofanirwa kuchengetedza yako pfuma. Kunyanya muzviitiko zvakashata zvakanyanya pane zvako zvaunofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ibex MAB: indices nyowani pamusika weSpanish stock
Kuvimbisa Ehtereum, zvakasarudzika uye nhungamiro yekudyara